Ny fitantanana mahomby dia manondro ny fampihenana ny fandrahonana any amin'ny MPA, indrindra fa ny hetsika isan'andro ataon'ny manampahefana, ary koa ny ezaka goavana amin'ny ankapobeny hiatrehana olana tahaka ny fandotoana ao an-toerana, ny fampandrosoana amoron-dranomasina tsy manara-penitra, ary ny fomba fanjonoana manimba.
Ny tombontsoa sasany dia azo tanterahina amin'ny fe-potoana fohy (1-5 taona) indrindra raha tsy mavesatra loatra ny fanerena ny fanjifana, fa ny proteinina 20-40 taona dia mamela karazan-karazan-tsavony maro be sy ireo karazam-bibidia efa ela mpihaza) ny fahafahana hitombo amin'ny fahamatorana ary hitondra bebe kokoa ny famerenana sy ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fiarovana amin'ny taona 20-40 (na fiarovana maharitra) dia ahafahana manohana ireo tombony ho an'ny fisaka sy ny tontolo iainana. ref
Any amin'ny faritra tena voa mafy, ny fiarovana fohy dia afaka manome tombontsoa ho an'ny karazana sasany, saingy ho very ny tombontsoa toy izany raha toa ka misokatra ho an'ny mpanjono ny faritra raha tsy mahomby. ref
jereo Mahaiza mandanjalanja ny fitantanana ny MPA ho an'ny loharanon-kevitra manokana amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny MPA, Adaptive Management mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fomba fitantanana sy politika, ary Fifandraisana mba hahatratrarana ny tanjona sy ny tanjona amin'ny fitantanana tsara kokoa.
Lahatsary: ​​Fandraisana ankeriny (2: 45)
Russell Sparks avy ao amin'ny State of Hawaii Misahana ny Saha momba ny rano dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny mpandray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fitantanana ny MPA.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fananganana toeram-ponenana an-dranomasina ho an'ny fitantanana ny jono, ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fampifanarahana ny fiovaovan'ny toetrandro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy vulnerability intrinsic to fishing fishing coral reefs and their Differential Recovery in Closures of Fisheries
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIreo faritra voaaro an-dranomasina sy amoron-dranomasina: torolàlana ho an'ny mpikarakara sy ny mpitantanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToeram-ponenana mahasalama ho an'ny olona manana fahasalamanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToeram-ponenana an-dranomasina: Torolàlana ho an'ny Siansa, ny Design, ary ny Fampiasana